HomeSuuqa kala iibsigaRoma oo Qarka Usaaran inay Paulo Dybala kala soo wareegto Juventus?
May 18, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Roma ayaa lagu soo waramayaa inay noqotay kooxda ugu cadcad saxiixa weeraryahanka Juventus Paulo Dybala , kaasoo qandaraaskiisa Allianz Stadium uu dhacayo xagaagan.
Horraantii Isbuucaan, 28-sano jirkaan ayaa xaqiijiyay inuu ka tagayo Marwada Duqda ah marka uu dhaco qandaraaskiisa, taasoo soo afjareysa 7-sano oo uu ku sugnaa kooxda.
Manchester United iyo Arsenal ayaa la rumeysan yahay inay soo bandhigeen xiisaha ay u qabaan Dybala, iyadoo kooxda Serie A ku xifaaltama ee Inter Milan ay sidoo kale dooneysay inay la soo wareegto xiddiga heerka caalami ee dalka Argentina, iyadoo lagu soo waramayo inuu qandaraas afar sano ah u saxiixay Nerazzurri.
Si kastaba ha ahaatee, La Repubblica ayaa ku warameysa in kooxda uu hogaamiyo Jose Mourinho ee Roma ay dhaaftay dhinacyadii kale ee loolanka kula jiray saxiixa Dybala, kaasoo la rumeysan yahay inuu sheegay inuusan marnaba dooran doonin inuu ku biiro kooxda ay xafiiltamaan ee Inter.
Roma ma xaqiijin karto kubbada cagta Champions League sanadka soo socda, laakiin waxay u badan tahay inay awoodaan inay Dybala u soo bandhigaan tacabur Europa League, Mourinho ayaana la sheegay inuu doonayo inuu heshiis ka gaaro khadka dhexe.
Dybala ayaa dhaliyay 115 gool waxaana loo diwangeliyay 48 caawin 292 kulan oo uu u saftay Juve,ka dib markii uu ka yimid Palermo 2015.